विमलेन्द्र निधिको कुर्सीमा कमल थापा बसेपछि…! « Surya Khabar
विमलेन्द्र निधिको कुर्सीमा कमल थापा बसेपछि…!
प्रधानमन्त्रीले पनि मर्यादाक्रमका विषयमा कुनै निर्णय नभएको र निधिलाई दोस्रो मर्यादामै राखेको भन्दै आश्वस्त पारे । यही खबर बोकेर निधि आइतबारै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकोमा पुगे । मंगलबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, त्यहाँ पनि देउवाले दोस्रो मर्यादाबाट हटेको भन्ने विषयमा विश्वास गरेनन् । आखिर भएको के रहेछ त ?